Tag: ika njikwa | Martech Zone
Tag: ika njikwa
Sunday, June 8, 2014 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
N'ime oge na-adịbeghị anya, anọ m oge dị ukwuu na LinkedIn karịa netwọkụ mgbasa ozi ndị ọzọ. Enwetara m oge na-adịbeghị anya na akaụntụ adịchaghị ka m wee nwee ike nyochaa onye na-enyocha profaịlụ m yana melite arụmọrụ nke ịkparịta ụka n'withntanet na ndị otu ebumnuche. Akaụntụ adịchaghị nwere atụmatụ ọzọ nke nhazi emelitere na nlele ka mma na nsonaazụ ọchụchọ. Nkọwapụta zuru oke, usoro njikọ nke LinkedIn emeela ka ọ dịwanye mma - achọtara m
Na nso nso a, Seth Godin jụrụ otu ajụjụ dị mkpa m chere na onye ọ bụla nwere azụmaahịa kwesịrị ịza: Gịnị kpatara gị? Gịnị mere ugbu a? Na-eche ihu n'ọtụtụ edemede ngwaahịa, mana na ọrụ ịntanetị, anyị nwere nhọrọ. N'ihe banyere ndị na-eweta Email, ndị ọrụ weebụ, na ngwanrọ njikwa mmekọrịta ndị ahịa, onye nwere azụmaahịa maara ihe kwesịrị ịjụ onye nwere ike ịnweta: Site n'ọtụtụ nhọrọ, gịnị kpatara m ga-eji họrọ gị? Mgbe m bidoro azụmahịa m